အိုဘားမား ၄၉နှစ်မြောက် မွေးနေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » အိုဘားမား ၄၉နှစ်မြောက် မွေးနေ့
အိုဘားမား ၄၉နှစ်မြောက် မွေးနေ့
Posted by kai on Aug 4, 2010 in Politics, Issues, Society & Lifestyle |2comments
President Barack Obama will celebrate his 49th birthday without his family. First Lady Michelle Obama and daughter Sasha, 9, are in Spain. Daughter Malia, 12, is at summer camp.
အဲဒီလူကြီး အသက် ၄၉နှစ်ပြည့်ပါသတဲ့..။
မွေးနေ့မှာ နိုင်ငံရေးအတွက် မဲဆွယ်နေရတာနဲ့ မိသားစုနဲ့ အချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
သူ့မိသားစုကလည်း စပိန်လည်လည်သွားနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိ..။
အဲ..၀ါသနာပါရင် မွေးနေ့ကဒ် လက်မှတ်ဝင်ထိုးပို့ နိုင်ကြောင်းပါ…တဲ့။ လက်မှတ်ထိုးပြီးရင် ရံပုံငွေကောက်မဲ့နေရာရောက်မှာမို့ ..ငွေမထည့်ပဲ လစ်လာလဲဖြစ်တာပါပဲ။
အောက်က သူတို့ပို့ တဲ့စာပါ..။ မူရင်းအတိုင်းပဲ..။
စကားမစပ်..ဟိုလူကြီးက အသက်ဘယ်နှနှစ်ကို ဘယ်နေ့မှာ ပြည့်မှာပါလိမ့်..။
တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုသူကို မွေးနေ့တောင် တိတိကျကျမသိရတာ..တယ်မဟန်တာပဲနော…။
Today’s the President’s 49th birthday, and I just heard how many of you have signed his birthday card so far: 1,266,611 as of this morning.
It’s already an amazing show of support. But before the card is delivered with all of your signatures, I want to make sure you have one more chance to add your name — I just added mine.
Will you sign it with me, if you haven’t already?
Subject: Will you sign Barack’s birthday card with me?
ဟိုလူကြီးကတော့ ၁၉၃၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ မွေးတာတဲ့။ ဝီကီမှာ တွေ့တာပါ။ ဘယ်လောက်မှန်သလဲတော့ မသိဘူး။ သူ့ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အပေါင်းက အမြဲတမ်း မေတ္တာပို့နေကြတာမို့ ထူးပြီးတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ ဘာတွေ ပို့ပေးဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး ခင်ဗျား။
မွေးနေ့မေ့နေတတ်တယ်ဆိုတာကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် အလုပ်များတဲ့လူတွေတခါတလေ ကိုယ့်မွေးနေ့မေ့နေတာပါ ။ ဘေးလူတွေကတော့သတိရပေးသင့်တာပေါ့နော် ။